Ndezvipi Zvakavanzika Zvimiro zveGmail? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 505
Dzimwe nguva tinonzwa kudaro tinopedza maawa mazhinji tichitarisa tsamba uye tichienda kuinbox izvi zvinoitika nemamwe mapuratifomu uye pamwe neGmail. Nekudaro, Google yaita kuti vashandisi vawane zvakanakisa kubva kuGmail yavo nemidziyo yekubvisa kudzokorora mabasa.
Ndeapi mabasa akavanzika eGmail.
Tumira maemail ako ku "Kurara": Iri basa rinokutendera kuti usarudze maemail uye wozobvisa iyo inbox kuti uise nezuva idzva, kureva kuti, inbox ichaonekwa panguva yakatarwa. Kuti uite izvi unofanirwa kushandisa "Snooze" kana "Snooze" chishandiso.
Zviyeuchidzo iwe pachako: Gmail inoisa maemail kumusoro kwebhokisi rekupinda otomatiki mune kesi yekusave nekutevera kwemazuva akati wandei.
Rongedza chiitiko neKarenda kubva kuGmail: Karenda iGoogle application, iri kurudyi rweGmail uye inobvumidza iwe kuronga chiitiko kana kusarudza chiyeuchidzo.
Yakadzama sangano: Shandisa zvinyorwa uye mafirita ayo anotendera iwe kuronga maemail anouya kubva kune mumwe mugashiri kana ayo anotaurwa neshoko chairo, izvi zvichaitwa otomatiki.
Gmail inofanotaura zvauchanyora: Gmail ine zvinhu zviviri zvine hungwaru zvinokutendera kuti upedze mitsara uye upe mhinduro dzemameseji anouya. Kuti uite izvi unofanira kushandisa "Smart Reply" kana "Smart Compose", mabasa anokuchengetedza zviuru nezviuru zvemavara asina kunyorwa.
Akawanda maemail kero: Kana iwe uchida kuve uine chero nhamba dzeshanduro kukero yako, wedzera nguva yekupedzisira kune yako email kero. Semuyenzaniso: [email inodzivirirwa] que a [email inodzivirirwa]. O [email inodzivirirwa] kana chero musiyano, iyo Google yakatumira iwo maemail akafanana.
Yeketani mapfupi: Iyo inokutendera iwe kuchengetedza nguva uye kuwana zvakananga, kuti uwane pop-up bhokisi iwe unofanirwa kumanikidza? uye inotevera runyorwa ichaonekwa:
Ctrl + Pinda zvinoreva kutumira meseji.
Ctrl + Shift + b zvinoreva kuwedzera Bcc vanogamuchira.
Ctrl + Shift + c zvinoreva kuwedzera cc vanogamuchira.
Ctrl +. zvinoreva kumberi kune rinotevera hwindo.
Mapfupi mapfupi: Ine basa remapfupi akasarudzika uye anosiyana kana iwe ukavhura hwindo nyowani kunyora kusvikira waendesa hurukuro kumarara.
Kuti uite aya marongero epamberi iwe unofanirwa kuenda:
Zvirongwa chati mukona yokumusoro kurudyi.
Kuwana zvakanangas keyboard.
Chinyorwa chemhando yepamusoro marongero:
/: isa chitupa mubhokisi rekutsvaga
c: nyora meseji nyowani
d: nyora meseji mutabhu nyowani
Negadziriro yeparutivi mashoko ako: Kana iwe uchida kuita backup yemameseji ako, iwe unofanirwa kunyorera kune email account iyo inogadzira backup kopi uye iwe woimisa iyo kuakaundi yako yeGmail, izvi kuitira kuti ini nditumire maemail kubhokisi guru rebhokisi.
Wobva watumazve kopi yematsamba anouya.
Zadza kero zvetsamba.
1 Ndeapi mabasa akavanzika eGmail.
2 Kuti uite aya marongero epamberi iwe unofanirwa kuenda:
3 Chinyorwa chemhando yepamusoro marongero:
4 Ita zvinotevera: